Ma jiri doonaan abaaro badan intii la filayay | Saadaasha Shabakadda
Saameynta isbedelka cimilada ee abaaraha ayaa ka yar sidii la filaayay
Monica Sanchez | | Abaaraha
In kasta oo daraasaduhu badan yihiin oo xaqiijinaya in kuleylka adduunku horseedi doono abaaro ka daran, ka dheer oo soo noqnoqda, hadda waxaa sidoo kale jira baaritaan kale oo aan aad ugu raacsaneyn aragtidaas. Kani waa mid ay wada qabteen Jaamacadda Kalifoorniya ee Irvine iyo Jaamacadda Washington, oo lagu daabacay joornaalka sayniska ee Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Sida ay qorayaashu sheegeen, uruurinta badan ee kaarboon laba ogsaydhka ayaa dhirta u oggolaanaysa in ay biyuhu ku sii haystaan ​​ciidda, sidaa darteed waxay si fiican ula qabsan karaan heerkulka sare.
Illaa iyo hadda, kaliya qiimaha jawiga (heerkulka, huurka, roobka) ayaa loo tixgeliyey in lagu qiimeeyo abaaraha, sida lagu muujiyo Tilmaamaha Ba'an ee Abaarta Palmer. Tilmaamahan, waxaa lagu qiyaasey in ka badan 70% ay la kulmi doonaan abaaro haddii boqol sano gudahood qiiqa CO2 lagu dhufto afar ka mid ah waagii warshadaha ka hor. Si kastaba ha noqotee, haddii macluumaadka ku saabsan isticmaalka biyaha ee dhirta lagu daro, qiimahani wuxuu ku dhacayaa 37%, sabab?
Kaarboon laba ogsaydhka ayaa muhiim u ah dhirta. La'aanteed, ma aysan awoodin inay sawirro ka dhigaan mana kori karaan. Si ay u nuugaan, waxay furaan dhismooyin ay ku leeyihiin caleemaha loo yaqaan stomata, laakiin tani waa dhibaato, maadaama ay u oggolaaneyso qoyaanku inuu baxo. In kasta oo xaaladdu is beddelayso haddii ay jiraan wax badan oo CO2 ah oo ku jira jawiga tan iyo stomata uma baahna inay furnaato ilaa inta, natiijo ahaan, lumitaanka biyaha ayaa kayar.
Weli, haddii abaaruhu dhacaan xilliyada kuleylka, way dilaan. Dhirtu way daciiftaa, marka ay sidaas yeelayaanna cayayaanka ayaa ku dilaya maalmo yar gudahood. Sidaa darteed, in kasta oo ay jiraan abaaro aad u yar, haddana waxay yeelan karaan cawaaqib xumo.
Waad akhrisan kartaa daraasadda oo dhammaystiran Halkan (Ingiriisiga).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Saameynta isbedelka cimilada ee abaaraha ayaa ka yar sidii la filaayay
4 xiiso leh oo ku saabsan kuleylka adduunka
Ku shub illaa illaa 9 digrii si aad u joojiso kuleylka